VOVONANA TSIMIALONJAFY : « Tomponandraikitra amin’ny fionganany ny mpitondra » | NewsMada
Mitaky fanorenana ifotony ny Vovonana Tsimialonjafy.
Tsy ananan-kavana ny fitondrana ny raharaham-panjakana. Rehefa misy ireo tsinay kely manamaimbo ny atiny, ilaina fandraisana fepetra faran’izay haingana avy amin’ny tompom-pahefana. Raha tsy tanteraka io, tomponandraikitra amin’ny fionganany ny mpitondra fanjakana…
Nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety ny Vovonana Tsimialonjafy tetsy Andrefan’Ambohijanahary, omaly. Nahitsy Rakotohasimbola Hasina ao anatin’ity Vovonana Tsimialonjafy ity nilaza fa “tsy ananan-kavana ny raharaham-panjakana. Noho izany, ireo heverina fa manaratsy ny fitondrana, mila andraisana fepetra hentitra. Raha tsy mandray fepetra ny mpitondra, tomponandraikitra amin’ny fionganany ny mpitondra”. Endriky ny fahasimban’ny fiainam-piarahamonina izao hita miseholany izao. Tsy mitsaha-mitotongana hatrany ny fiainam-bahoaka vokatry ny rafitra rehetra nifandimby teto amin’ny firenena. Nambaran-dRakotohasimbola Hasina hatrany fa “fifandimbiasam-pahefana amin’ny alalan’ny fifidianana ihany no tokony handraisana fahefana. Na eo amin’ny mpanohitra, na eo amin’ny fitondrana, mila resy lahatra amin’izany ny rehetra”. Tsy voatery eo amin’ny fitondrana ihany ny fandraisana andraikitra fa eo amin’ny sehatra rehetra misy azy. “Raha tsy mandray fepetra faran’izay haingana ny mpitondra, indrindra ho an’ireo izay fantatra fa manaratsy endrika ny fitondrana. Tsy mahagaga fa hiongana ho azy eo izy ireo, ary tsy ho ela a!”, hoy izy nanantitrantitra.
Mila tohizina ny fanadiovana
Navoitran’ity vovonana ity fa miaro ny soatoavina repoblikana izy ireo. Fiaraha-mientan’ny ankolafin-kery rehetra na avy eo amin’ny mpitondra na mpanohitra ary ireo hery afovoany izao fanambarana notanterahin’izy ireo miaraka izao. “Very fanahy mbola velona ny vahoaka malagasy, ka mila haverina haingana ny fitoniana sy ny fahatokisan’izy ireo ny mpitondra fanjakana miaraka amin’ireo mpanao politika tsy ankanavaka. Mangataka ny fahendren’ny filoham-pirenena hanohy hatrany ny fanadiovana ny fitondrana isan’ambaratongany”, ny Vovonana Tsimialonjafy. Manao antso avy amin’ny hery velona rehetra eto amin’ny Firenena izy ireo, mba hanomboka amin’ny fiaraha-midinika momba ny fanovana sy ny fanorenana ifotony. Anisan’ny tafiditra amin’ny fangatahan’izy ireo ny fametrahana araka ny tokony ho izy ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy.